Isayensi akusho yima, nsuku zonke zikhona amathuluzi amasha ukusiza ukugcina, ukuthuthukisa ubuhle abesifazane, ukususa ukubukeka ukukhubazeka ezifana izibazi, imibimbi nezinye nezici eziningi isikhumba. Nje izindlela ezinjalo futhi ukusebenzisa laser Erbium.
Erbium laser - iyithuluzi enemisebenzi for isikhumba resurfacing okwenza kungabi izibazi, post-induna, imibimbi, imidwebo, izibazi kanye ingozi imfundo kancane.
Umgomo we operation salo ukuze ususe kusukela isikhumba amaseli ubudala ukuhwamuka kokuqukethwe kwabo umswakama (vaporization). Izicubu ngenxa lo mcimbi enempilo futhi waqabuleka. ukuvuselelwa izinqubo ekusebenzeni ngokuzikhandla kuthuthukisa isikhumba umsoco, evamile kwegazi. Ukwakheka imicu entsha enwebekayo fibrous nokunwebeka. Labhujiswa basusa ubudala efile izinhlayiya isikhumba.
Erbium laser, okuyinto libuyekeza ezihlukahlukene, akusho ukungena izingqimba ezijulile esikhumbeni, futhi isebenza kuphela ebusweni. Endaweni iphathwa ngokushesha waphawula dermis isakhiwo ushintsho ukuze kube ngcono. Kwenzeka kusebenze enamandla collagen zamagama, kuze sokubuyiselwa egcwele nohlaka isikhumba kuyi-collagen.
Le nqubo smoothes esikhumbeni, kwandisa turgor yayo, kunciphisa inani imibimbi futhi zibe nethonya elihle kakhulu ukubukeka kwesikhumba.
Njengazo zonke lezo zinqubo, izinkomba ezithile futhi resurfacing laser. Erbium laser kusebenza kahle futhi:
isikhumba ukuguga, kakhulu wadalula izinguquko ezihlobene nokukhula (kususa imibimbi);
ukuqeda izibazi nangemuva induna;
Imininingwane emzimbeni futhi izindawo esikhunjeni;
nokususa neoplasms ingozi encane (atheroma, nevus nokunye. d.).
Ngaphambi ibhekane inqubo, kufanele sinake Izimo. It is hhayi Kunconywa ukuba benze abantu nge ukuvuselelwa kancane epidermis, uma kukhona izinqubo ukuvuvukala nesimungumungwane ahlukahlukene. It is contraindicated ayephuli ibala lesikhumba, erythema, keloids, i-herpes, exacerbation izifo ezingamahlalakhona kanye ezithathelwanayo.
Erbium laser Kwenziwa ngaphandle ukuqeqeshwa okukhethekile. Kwezinye izimo, isikhumba ziphathwe uyaxebuka ultrasonic, owabeka hardware hydration. Iziguli mnyama ibala lesikhumba, kuyafaneleka bona izinsuku 14 ngaphambi inqubo ukusebenzisa imikhiqizo aqukethe 2-4 amaphesenti hydroquinone.
Fractional laser Erbium isetshenziswa ngenjongo rejuvenation ngokungabi bikho isikhumba esilengayo. Ngaphambi inqubo, yenza facelift, futhi enze ezipholisha ngemva kwezinyanga ezintathu, okuyinto smooths kobuso epidermis, ngempumelelo kokukhipha imibimbi kwakhiwa, izibazi.
Ngaphambi nokuqedwa ejenti post-induna isinqandakuvunda esetshenziselwa prophylaxis. Le ndlela iphumelela kakhulu lapho ubuso has a fresh induna asemigodini. Lapho ukuvuvukala ezinqunyiwe inkambo kwamaphilisi izinsuku 3-5 ngaphambi laser resurfacing. Ngaphambi inqubo, yenza izinzwa wendawo.
Erbium emva kokwelashwa izidakamizwa equkethe retinoids esetshenziswa ngaphambili kuka ngemuva kwezinyanga 6-8.
Indima ebalulekile udlalwa yi-kwemizwelo ngokwengqondo isiguli. Kubalulekile ukuqonda ukuthi ngemuva kweseshini yezimonyo hhayi inganyamalala zonke imibimbi. Futhi, ngemva nezibazi post-induna kanye bangase bafinyelele emamaki elimhlophe esikhumbeni. Inqubo akuqinisekisi ukungabi induna okwengeziwe iphinde ivimbele kumiswa induna izibazi entsha.
Erbium laser izimonyo
Ukuyeka ukukhubazeka ezincane kwesikhumba wenziwa isikhathi esifushane futhi akakubangeli nobunzima. Eyenziwa izindlela ezijwayelekile. Inombolo osondela kuncike endaweni inkinga epidermis kucutshungulwa pigmenting ingxenye ukujula rumen kumiswa. Kuye eyinkimbinkimbi yomsebenzi ihlukaniswe izigaba eziningana.
Sanding evele ezinkulu, ikakhulukazi ebusweni nasentanyeni, wenziwa ngaphansi izinzwa ngomjovo. Phakathi ukusebenza, elawulwa umfutho wenhliziyo. Esimisweni, udokotela ogqoka izibuko akhethekile isebenzisa izesekeli ezidingekayo. Isiguli ukuvikela amehlo akho kusukela laser ukugqoka izibuko ezikhethekile, futhi ngesikhathi Isivalo blepharoplasty - ipuleti efakwe phakathi namakhulu eminyaka ngemva pretreatment nge izinzwa ejenti zendawo.
Isicelo ubuchwepheshe erbium laser ukususa imibimbi nangemuva induna kuyahlukahluka. Esimweni sokuqala, inani amasethi kulawulwa, kungakhathaliseki ukuthi umphumela. Ukuze izoni ngayinye akhethiwe amandla laser ishayela. Ivunyelwe udlule eminye imibimbi ezijulile. Umbala ophuzi kwesikhumba likhombisa denaturation kuyi-collagen.
Ukuyeka post-induna ikhiqizwa ngezindlela ezimbili. Inqubo njengoba evulekile induna asemigodini futhi polishes esikhumbeni azungeze isibanda ngamunye noma isibanda ukuze uqondanise kancane uphakamisa egqumeni. Kwenza pass, emgodini umbukwane ingxenye yesine futhi ngamakota amathathu kwesikhumba ezungezile. Zonke AMANXEBA kusukela induna ahambelana ezingeni kwesikhumba main.
Ngemva resurfacing isikhumba aphathwe sisetshenziswa gauze oswakanyiswe. Ukopha Welashwa nge isixazululo 0.1 amaphesenti adrenaline noma Dicynonum. Ubuthakathaka encane ubeke collagen imaski futhi bopha ne methyluracyl, gentamicin noma erythromycin wamafutha. Shintsha kubo njengoba kudingeka futhi isuswe ngokugcwele ngosuku 4-7. Phakathi nale nkathi, iziguli ebekiwe izidakamizwa ukufukula epithelialization ( "Aktovegin", "Solcoseril").
Izingxenye ezinkulu isikhumba esikhathini postoperative iphathwa Foam "Panthenol", futhi ngemva kwesikhashana Sigcizelela ifilimu collagen nge ebusweni umswakama futhi methyluracyl wamafutha. Fitizela izinguquko nsuku zonke. Uma kukhona usongo ukutheleleka, antibiotic kungaphakathi ( "Macropen") futhi ngaphandle ( "Bactroban").
Ngemva ngomthelela laser erbium (izibuyekezo ngakho, ngasendleleni, ezihluke kakhulu kunokuba), kukhona esivuthayo kancane futhi ukulunywa, ukuvuvukala kwezinye izindawo. ukudlula postoperative izimpawu ukungakhululeki Ngosuku lwesine.
Udokotela ohlinzayo kususa nokubopha ngebhandishi 5-9 ngosuku. Zonke iziguli ngaphandle kokukhetha, nganoma yisiphi isikhathi sonyaka udinga ukusebenzisa umuthi ovikela isikhumba nge SPF of 30 noma ngaphezulu. Abantu othambekele hyperpigmentation, kufanele ahlinzeke 100 Ukuvikelwa amaphesenti kwesikhumba. Ungasebenzisa imikhiqizo cosmeceutical ukususa erythema ngokushesha.
Erbium laser, kanye nanoma yimuphi omunye ukusebenza kungaholela ukuxakeka. Ziyakwazi:
ukulunywa futhi esivuthayo;
okuphindaphindiwe izilonda abandayo;
ukuvuvukala kobuso ngayo;
Hyperpigmentation egcina isikhathi. Ukuze lula inqubo, ukutusa ukusetshenziswa amakhorali ukhilimu. Okuphindaphindayo imfiva herpetic babonakala lapho ukugaya laser buccal ndawo. Ukuze zokuvimbela yayo, kanye ukuvimbela ezinye isifo esibangelwe igciwane, ebekiwe izidakamizwa elwa namagciwane. Basuke iphuzwe izinsuku ezingu 7 ngaphambi nangemva inqubo. Futhi ebekiwe imithi ekuphathweni temlomo na ngoba isicelo baqonde izinto ezenzekayo. Lapho edema kuyadingeka ngesikhathi sokulala ukusebenzisa umcamelo owengeziwe. Ngosuku lokuqala emva kokwelashwa laser we odokotela isikhumba batusa isicelo oyinkinga indawo ice. izibazi ezijulile nezibazi ngokuvamile kwenzeke ukuchayeka we-laser erbium ukujula, uma isikhumba beyizidlova keloid.
Laser resurfacing kwesikhumba akukhona konke ukufinyelela. Esikhathini nokucwala yezindleko kucutshungulwa yonke isikhumba ebusweni - ruble ayizigidi 30-65. Inani luyehluka kuye yinkimbinkimbi inqubo.
Lapho elula izimpawu ngesisu sami resurfacing erbium laser kubiza ruble ecishe ibe yizinkulungwane 27-45. Anesthesia yokugcoba, imithi elwa namagciwane, okhilimu kanye nezinye izinqubo ezidingekayo ukuze izimali okumele zikhokhwe ngokwehlukile. Futhi, kuzomele ukhokhe imali ethe xaxa ukugcinwa nesineke ezinqubweni esibhedlela kanye nokuvuselelwa.
Uphenyo erbium laser
Laser isikhumba resurfacing is kuyanda. Eqeda erbium laser on AMANXEBA (Izibuyekezo bathi it ususa okuthunyelwe-induna akuyona okokuqala), imibimbi, ezincane kungavamile ukuba ingozi. Ukuze umphumela ubonakala, kumelwe wenze ubuncane 3-4 izinqubo nge esingaba izinyanga 1.5. Umphumela akukhona ngokushesha, kodwa ngemva kwenyanga. inqubo nokuvuselelwa ihlala ngeviki. Isikhumba emva inqubo sifana uqweqwe ezishile eqala ukuba bahlubuke 3-4 izinsuku. Esikhundleni salo Kumiswa ebusweni abushelelezi epidermis. Ngaphansi ebonakalayo kukhona imibimbi ezijulile futhi cishe zinyamalale encane. Isikhumba is some futhi ngezicabha. Lo mphumela umxhwele kwabesifazane abaningi. Abaningi zom ukulondoloza ukubukeka kwesikhumba abaphendukela laser isikhumba resurfacing kaningi.
Kukhona izintokazi ukuthi le nqubo ibizwa ingafinyeleleki. Abazange uthole umphumelo oyifunayo. Kukholakala ukuthi laser Erbium kuyashaqisa kakhulu esikhumbeni, futhi kuyabiza. Ezinye imiphumela emibi ziyabonakala ngesimo induna, izibazi kanye namabala amhlophe. cosmetologists abaningi musa batusa lokhu inqubo abesifazane ngaphansi iminyaka engamashumi amane, njengoba thins isikhumba kakhulu.
Kulokhu osekushiwo kumele kuphetfwe ukuthi imiphumela etholwe laser resurfacing kwahlaba abaningi umxhwele. inqubo esibuhlungu. Ngaphambi ukukwenza, owesifazane kufanele uhambe uyokhonza kanye Izimo, esazini futhi ngokucophelela nesisindo ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo.
Yini okumele uyenze uma wake ngiphethwe yikhanda?
Sea-ijikijolo lingase uwoyela: libuyekeza isicelo. Ukulungiselela lamafutha ulwandle lalesi sihlahla. Ukwelashwa lamafutha ulwandle lalesi sihlahla
Zuza indlela yokwenza anyanisi
Uma udla mushroom okungukuthi? Imiphumela ubuthi fly agaric